BAOLINA KITRA :: Ho fantatra amin’ny janoary ny datim-pifidianana FMF • AoRaha
BAOLINA KITRA Ho fantatra amin’ny janoary ny datim-pifidianana FMF
Tao anatin’ny dimy amby roapolo andro nijoroan’ny komity ho amin’ny fanavaozana ny Federasiona malaga­sin’ny baolina kitra izay dia nanambara ny hamoaka ny datim-pifidianana ny mpikambana ao aminy, omaly, teny amin’ny tranoben’ny baolina kitra, eny Isoraka. «Homena amin’ny volana janoary ho avy izao ny tetiandrom-pifidianana, izay nahazoana fankatoavana tamin’ny Federasiona iraisam-pirenena. Marihiko fa foana avokoa ireo filatsahan-kofidiana tamin’ny farany teo fa miainga amin’ny lisitra vaovao mihitsy isika. Hiezaka izahay ny hamita ny adidy napetraka taminay hatramin’ny fiafaran’ny fotoam-piasanay, amin’ny volana mey ho avy izao », hoy i Attalah Béatrice, filohan’ny « Comité de normalisation » eo anivon’ny Fede­rasiona malagasin’ny baolina kitra.
Hatramin’izao fotoana izao aloha dia ny CAN Beach Soccer, izay nandraisantsika anjara tany Ejypta, no asa maika natrehan’izy ireo. Hifantoka amin’ny solontena amin’ny fifi­dianana (Délégués) any amin’ireo rantsa-mangaikan’ny federasiona izy ireo, ankehitriny. « Mety hisy ny famerenana ny fifidianana any amin’ireo seksiona na ligim-paritra nisy olana, raha misy izany », hoy i Sahondra Rabenarivo, mpikambana ao amin’ny komity.
Ankoatra izany dia nanambara ihany koa izy ireo fa « nahazo fanasana avy tany amin’ny Emirat Arabes Unis, hiatrika lalao ara-pirahalahiana amin’izy ireo, amin’ny 21 na 28 desambra ho avy izao, ka ity firenena ity no hiantoka manontolo ny Barean’i Madagasikara”. Misy olana anefa izany satria maro ireo mpilalao tsy afa-miala any amin’ny kliobany satria tsy andro natokan’ny Fifa hamelana azy ireo hiatrika lalao ara-pirahalahiana ireo daty ireo.
Fiarovana mandritra ny fetim-pirenena Polisy an’arivony haparitaka eto an-drenivohitra
KITRA – «LIGUE 1 ANALAMANGA» :: Mitarika vonjimaika ny ekipan’ny AS Adema
KICK BOXING – FIFANINANAM-PIRENENA :: Nahoron’ireo mpikatroka avy eto Analamanga ny amboara